၃.၂။ အငြင်းပွားဖွယ်များကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာထားခြင်း - Investigative Journalism Manual
အင်တာဗျူးတစ်နေရာတွင် သင့်မေးခွန်းကြောင့် အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူကို ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်စေနိုင်လောက်သည့် (အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များအကြောင်း သို့မဟုတ် ကောလာဟလ ဖြစ်နေသည့် ကိစ္စ စသဖြင့်) မေးခွန်းများကို မေးရန်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါတွင် သင့်သတင်းရင်းမြစ်အား “ကျွန်တော်/ကျွန်မ အင်တာဗျူးခဲ့သမျှ သိရတာတွေအရ …. ကိစ္စဟာ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ် ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်တွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်”၊ “ကျွန်တော်/ကျွန်မရဲ့ အယ်ဒီတာက ဒီမေးခွန်းလေး တစ်ခုတော့ မဖြစ်မနေ မေးခဲ့ပါဆိုလို့ … ” စသဖြင့် မေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ အစ်အောက်မေးမြန်းပါ။ သို့သော် လိမ်ညာခြင်း၊ အခြား သတင်းရင်းမြစ်များ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ဟု ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့် “တခြား သတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက် ခင်ဗျား/ရှင့်ကို …. လုပ်နေတာ မြင်တယ်လို့ ပြောတာကြားရတာကတော့ ခင်ဗျား/ရှင်လည်း စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ အောက်မေ့မိတယ်” သို့မဟုတ် “ခင်ဗျား/ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟလတစ်ခု ဖြစ်နေပေမယ့် ကောလာဟလဆိုတာ စိတ်မချရဘူးဆိုတာ အားလုံး သိထားလက်ခံထားကြပါတယ်” စသဖြင့် ပြောနိုင်ပါသည်။